Isibuyekezo: I-Dolphin Show ku-Georgia Aquarium
I-united states Georgia I-Atlanta
I-Dolphin Show e-Georgia Aquarium
by ULaura Horton
Ukubuyekezwa kwe-ATT Dolphin Tales
I-Georgia Aquarium ingenye yezinto ezikhangayo kakhulu e-Atlanta, kungakhathaliseki ukuthi ungumvakashi noma wendawo. Njalo ngezimpelasonto le ndawo ethanda kakhulu emanzini engaphansi kwamanzi igcwele imindeni, imibhangqwana, nabangane abaye bahamba emhlabeni jikelele ukuyobheka impilo ngaphansi kolwandle (kanye nomfula!).
NgeThikithi Elisha Elisha lase-Georgia Aquarium, yonke imisebenzi e-aquarium ifakwe kwi-tarik eyisisekelo yamatiti, kufaka phakathi lezi zikhangisi ezimbili ezazidingeke ukuthi zikhokhwe imali encane.
Lezi zikhangisi ezongezwayo ziyisibonisi se-Depot 4-D kanye ne-AT & T Dolphin Tales, isenzo esibukhoma sokubonisa ihlengethwa. Manje uzokwazi ukugcina isihlalo sakho ku-Dolphin Tales uma uthenga ithikithi lakho ku-intanethi.
Nganginethuba lokuhlola umboniso wehlengethwa ngoMgqibelo omatasa ntambama. Isiboniso esithandwa kakhulu senziwa izikhathi ezimbalwa ngosuku, ngakho qiniseka ukuthi uhlela ukuvakasha kwakho ngokufanele. Ngakhuphuka izinyathelo ze-bleacher futhi ngathola isihlalo phakathi kwalokho engalinganiselwa ukuthi ngiku-500 ezihambele izivakashi ze-aquarium ezithakazelisayo. Dlulisa phambili imigqa embalwa yokuqala ngaphandle kokuthi ufuna ukumanzi - lezi zihlalo "ze-splash zone" zimakwe ukuze zikwazise ukuthi uzofuna ukukhipha isambulela sakho. Yize ngangihlezi kude-phambili kwezingxenye ezimbili kwezintathu zendlela eya phezulu ngakwesokudla - Ngisenombono omuhle kakhulu wokubonisa.
Ngakho-ke, yini ongayilindela kumbukiso wangempela? Yebo, into yokuqala ukwazi ukuthi akukhona nje ngamahlengethwa.
Empeleni ungumculo onomlando omncane, oholwa ngumphathi wamagilisi omlingo obiza amahlengethwa ukusiza ukusindisa umkhumbi wakhe. Lokhu kusho ukuthi uzodinga ukugwinya amanye ama-theatrics amnandi, ama-cheesy cheesy ngama-dolphin tricks akho. Uma ulungele lokho, inani lokukhiqiza kanye namahlengethwa ngokwawo empeleni lihle kakhulu.
Ama-flips aphezulu, ama-fun tricks, nabaqeqeshi bomuntu abanomusa bafaka i-ballet yamanzi emangalisayo ehlala njalo imizuzu engama-30.
Abazali kufanele baqaphele ukuthi lo mbukiso uqukethe ezinye izigcawu ezingabonakala ziyesabeka ezinganeni ezincane. Kukhona isilo sasolwandle esibi esimelelwa ngomsindo omkhulu, ubumnyama, nezibani. Ezinganeni ezihlezi ezungeze le mhlahlandlela, abambalwa kuphela babonakala bevinjelwe.
I-AT & T Dolphin Tales ngokuqinisekile kufanele iyenze imindeni enezingane ezincane. Izingane zizokuthanda ingxenye ehambisanayo yokucula, i-show colorful kanye namadonphins amangalisayo ngokwabo. Abantu abadala abangenazo izingane bangase bafune ukuya khona manje lo mbukiso kufakwe kwiThikithi Yonke, kodwa zibophezele ukuboniswa okungenalutho.
Ufuna ukulondoloza imali ohambweni lwakho ukuya e-aquarium? Hlola lawa mathiphu !
Ngaphakathi kwe-Atlanta: Atlanta City Councilman First Hall
Kuphi ukukhetha ama-apula e-Atlanta
Thatha izingane zakho zokudoba e-Rainbow Ranch eCumming, eGeorgia
I-Atlanta Bachelorette Party Imibono Yomlobokazi Wonke
Indlela Yokuhlala Uphephile E-Atlanta Transit Public
Imisebenzi Yomndeni yamahhala ku-DeKalb-Peachtree Airport
Amamyuziyamu Omlando Womama eWashington, DC
5 yezindawo ezihamba phambili zeRV Parks eNyakatho Central Mexico
Imisebenzi 10 yokusiza izingane zakho ukuhlola ezinye izizinda
I-Northern Ireland - Indawo Eyingozi?
Ukugula Kwama-Altitude - Uma Umzimba Wakho Uphendukela Emagqeni angaphezu kuka-9,000
Okufanele Ukwenze NgoSuku Luka-Valentine eToronto uma Ungashadile
Ingabe Kungenzeka Ukuvakashela La Sorbonne eParis?
Izithombe zikaSchlitterbahn Waterpark New Braunfels
I-Lake Erie's Kelleys Island
Izitolo ezine ezihamba phambili eziseParis, eFrance
I-Texas Halloween Imicimbi Nemisebenzi